Wararka - Hebei beeshii ugu horeysay ee qaab dhismeedka birta cagaaran waxay bilaabaysaa inay ka bilowdo Shijiazhuang
Hebei beeshii ugu horeysay ee qaab dhismeedka birta cagaaran waxay bilaabi doontaa dhismaha Shijiazhuang
13-kii Janaayo, "Dowladda Dadka Gobolka Hebei ee ku saabsan hirgelinta horumarinta dhismayaasha qaab-dhismeedka golaha ee hirgelinta aragtiyada" sii-deynta rasmiga ah, si xoog leh loo dardar-geliyo codsiga golaha Hebei iyo horumarka. Zhuo Da Group oo ay weheliyaan shirkado waawayn oo ay dawladdu leedahay King Kong Group, ayaa isticmaali doona tikniyoolajiyadda isku dhafka dharka, kooxda King Kong waxay ku taalaa Shijiazhuang City, Degmada Zhengding, Jingxing County, aaggii hore, aagga dhirta qashinka ee 1,000 hektar oo dhul ah horumarka, Gobolka Hebei si loo dhiso qaab-dhismeedka birta ugu horreysa ee biraha cagaaran ee isku imaatin ballaaran. Waxay joogi doontaa Shijiazhuang iyo Gobolka Hebei si kor loogu qaado adeegsiga qaab-dhismeedka birta cagaaran ee dhisidda jaan-goynta, taasoo horseedaysa isu-imaatinka Gobolka Hebei, horumarinta warshadaha dhismaha.
Kuwa soo socda ayaa la mid ah "
Kooxda Zhuoda iyo King Kong Group ayaa kala saxiixday heshiis iskaashi
Gobolka Hebei, qaab-dhismeedkii ugu horreeyay ee birta cagaaran ah ee la soo uruuriyay bulshada ballaaran ayaa ku dhow inuu ka bilowdo dhismaha Shijiazhuang. 3-dii Maarso, Kooxda Zhuoda iyo King Kong Group "si loo horumariyo dhismaha cusub ee magaalada iyo Jijia (Zhuoda) oo ah qaab dhismeedka isku imaatinka dhismaha qaab dhismeedka xaflada saxiixa saxiixa" oo lagu qabtay Magaalada Shijiazhuang. Labada dhinac waxay kala saxiixdeen "iskaashiga horumarinta heshiiska qaab dhismeedka mashruuca dhismaha" oo ay wada galeen King Kong Group si ay uga ciyaaraan faa'iidooyinka dhulka iyo ilaha mashruuca, kooxda Zhuo Da si ay uga ciyaaraan faa'iidooyinka horumarka iyo dhismaha iyo isu imaatinka dhismaha, Boqorka Kong Group wuxuu ku yaalaa Magaalada Shijiazhuang, Gobolka Zhengding, Jingxing County,, Warshadaha qashinka ah iyo 1,000 hektar oo kale oo dhul ah oo loogu talagalay xoojinta horumarinta dhulka, dhismaha guryaha caafimaadka, isku imaatinka goobaha la dego iyo mashaariic kale si kor loogu qaado hagaajinta degsiimooyinka dadka ee Shijiazhuang iyo geedi socodka horumarinta magaalooyinka.
King Kong Group, Zhuoda Group si loo horumariyo dhismaha cusub ee magaalada iyo cilmi baarista Hebei iyo isku imaatinka mashruuca muujinta dhismaha si loo bilaabo goobta xaflada saxiixa.
King Kong Group waa shirkado dowladeed oo ku yaal Magaalada Shijiazhuang, Mashiinka gubashada gudaha Shiinaha waa qeyb muhiim ah oo ka tirsan fasal ballaaran oo ka mid ah shirkadaha muhiimka ah. Sababo taariikheed awgood, Kooxda King Kong waxay ka tirsan yihiin guryo badan oo duug ah oo da 'ahaan ka badan 40 sano, guryo badan ayaa qatar noqday. Sanadihii la soo dhaafay, dowladda hoose ee Shijiazhuang waxay si xoog leh u dhiirrigelisay dib u habeynta daadinta, isbeddelka hore, waxay sare u qaadeysaa jawiga nolosha, iyadoo si xoog leh u horumarinaysa warshadaha dhismaha ee nooca cagaaran, waxayna ugu dambeyntii gacan ka geysatay iskaashiga King Kong iyo Zhuoda.
"Qalabka cusub ee dhismaha ee Zhuoda iyo qaab dhismeedka isku imaatinka cagaaran ee la jaan qaadaya isbeddelka horumarka ee warshadaha dhismaha qaran, ee ku saabsan codsiyada dhismaha madaniga ah, faa'iidooyinka ayaa aad u muuqda." Guddoomiyaha King Kong Group Wang Jiming in astaamaha muuqda ee dhismaha cagaaran ee Zhuoda ay aasaas u tahay wada shaqaynta labada dhinac Wuxuu yidhi adeegsiga teknolojiyadda dhismaha cagaaran ee Zhuoda, maaha oo keliya ilaalinta tamarta deegaanka u habboon, muddada dhismuhuna waa mid gaaban, aad u ku habboon horumarka ballaaran ee isbeddelka hore. Waxaan aaminsanahay in wadashaqeynta Zhuo Da ee isbeddelka aagga duugga ah ee King Kong Group, warshadda qashinka, ay si dhakhso leh u hagaajin karto deegaanka nool, kor u qaadi karto magaalada Shijiazhuang. “
Wang Jiming, Guddoomiyaha King Kong Group, wuxuu si aad ah uga hadlay iskaashiga labada dhinac
"Tani waa wada shaqeyn taariikhi ah." Saxiixa saxiixa, madaxweyne kuxigeenka fulinta kooxda Zhuoda Yang Jigang wuxuu sheegay in wada shaqeynta ay la leedahay King Kong Group, kaliya ma aysan furin dhisme weyn oo cagaaran oo ku yaal Zhujia Zhuang codsi balaaran, laakiin sidoo kale waxay furtay Gobolka Hebei iyo Magaalada Shijiazhuang ee horumarinta baaxada weyn. adeegsiga iskuxirka bulshada ee iskuxirka qaab dhismeedka birta ee noociisa noociisa ah. Zhuo Da Group oo ah shirkadihii ugu horreeyay ee ka shaqeeya dhismaha dhismaha ee Shijiazhuang, Shijiazhuang waxaa lagu horumariyey tobanaan milyan oo mitir murabac ah oo la deggan yahay, laakiin cirbadeynta waxyaabaha "isugeynta cagaaran" ee horumarinta iskaashiga, ayaa Zhuoji ku noqon doonta dhismaha bulshada magaalada Shijiazhuang. mashruuc "bar cusub"
Madaxweyne kuxigeenka fulinta kooxda Zhuoya Group Yang Jigang ayaa sheegay in labada dhinac ay ka fureen iskaashi gobolka Hebei iyo magaalada Shijiazhuang ee horumarinta bulshada ee balaaran ee ku saabsan adeegsiga qaab dhismeedka birta ee golaha ugu horeeya.
Yang Jigang wuxuu tilmaamay in 13-kii Janaayo, "Dowladda Gobolka Dadka Hebei ee ku saabsan horumarinta dhismayaasha qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka fikradaha" ayaa si rasmi ah loo sii daayay, si xoog leh loo dardar-geliyo codsashada golaha Hebei iyo horumarka. Dongfeng, Maarso 1, Zhuo Da iyo Machadka Cilmi-baarista Gobolka Hebei waxay kala saxiixdeen, naqshad isku dhafan, tiknoolajiyad, wax soo saar iyo ilo kale, soo bandhigida shirkadaha waaweyn ee waaweyn, shirkadaha ay dawladu leedahay iyo hay'adaha maaliyadeed, si loo dhiso Ji nooca dhismaha nooca cilmi baarista (Zhuoda). isbahaysiga warshadaha. Wadashaqeyntan ayaa ah isbahaysiga warshadaha si wada jir ah loogu horumariyo mashruuc, “Waxaan sii wadeynaa inaan diirada saarno qaab dhismeedka isku imaatinka cagaaran iyadoo la adeegsanayo magaaleynta, caawinta caasimada gobolka howsha
Guddoomiyaha King Kong Group Wang Jiming, madaxweyne ku xigeenka fulinta Zhuoda Group Yang Jigang isagoo matalaya labada dhinac waa la kala saxiixday
Wada shaqeynta Zhuo Da iyo King Kong waxay noqon doontaa horumarinta ahmiyada fog ee dhismaha Shijiazhuang. ” Kaqeybgalay kulanka waaxaha ay khuseyso, wuxuu yiri dowlada hoose ee Shijiazhuang waxay ahmiyad weyn siineysaa isku imaatinka warshadaha dhismaha, waxayna sameysay hadafyo horumarineed oo u dhigma, iskaashiga King Kong ee horumarinta mashruuca muujinta qaab dhismeedka golaha, magaalada iyo Gobolka Hebei kor u qaadista adeegsiga qaab-dhismeedka birta cagaaran ee dhisidda jaan-goynta, taasoo horseed u ah isu imaatinka Gobolka Hebei, horumarinta warshadaha dhismaha. Waxaan rajeyneynaa in labada dhinac ay isku dhafan yihiin, si mashruucu u bilowdo xilli hore, dhismo deg deg ah, sawirka, si dadku runtii ugu raaxaystaan ​​warshadaha guryaha ee qaranka, faa'iidooyinka warshadaha.
Qaab dhismeedka Birta Prefab, Tower Xaraynta Power Steel, Taawarka Isgaarsiinta Dowladda Hoose, Qaab dhismeedka birta tuubada, Tower Tower Xagasha Electric, Taawarrada birta korontada,